Kutfutfukiswa izinqumo zokuphatha kuyinto inqubo okuletha ndawonye imisebenzi esemqoka ekuphathweni nokuhlela, kanye nenhlangano, ukulawula kanye nogqozi. Izinqumo ezithathwe takhiwo uhulumeni lichazwa ngokuthi Izinga kanye nokwethulwa ngokuyiko izinqubo ezenzeka ohlelweni ephethwe. Ngaphezu kwalokho, lezi zixazululo unike amandla ukuthuthukiswa endaweni oguqukayo ngenxa yokuba nekhono lokuhlinzeka okusezingeni eliphezulu ukuzivumelanisa nokuqinisela ukuba iziphi izici zangaphandle.
Kutfutfukiswa izinqumo zokuphatha ukumboza izindawo iningi umsebenzi womuntu, futhi ungomunye ingxenye ebaluleke kakhulu futhi ebalulekile ukuphathwa.
amafomu ukuthuthukiswa ukuphathwa isixazululo babe izincazelo ezimbili efomini enwetshiwe futhi ayibanzi.
definition Expanded eliqhathanisa izinqumo njengoba inqubo nokuphathwa. Nciphisa umqondo kuhilela ukuthuthukiswa kanye izinqumo njengoba Ukukhethwa izixazululo ephumelela kunazo kusukela ezihlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, abacwaningi abaningi kulo mkhakha kuthiwa kubangelwa ekuthathweni kwezinqumo inqubo isinyathelo odala kakhulu lokhu okwehlukile, kanye ukusebenza kwabo futhi eminye ukulawula ukuhlaziywa yi.
Kutfutfukiswa izinqumo zokuphatha athathwe, ngokuvamile ikhanda. Nakuba akuhlali izinqumo kungenziwa ngokuthi abaphathi. Ngokwesibonelo, izinqumo eziphathelene nemisebenzi yezobuchwepheshe, izinqumo ngesisekelo ucwaningo lwabo, isinqumo sokubhaliswa kwanoma yimuphi idokhumenti akuyona ukuphathwa abazalwa. Ngemva isinqumo zokuphatha ibizwa ngokuthi isinqumo, eyamukelwa ohlelweni yomphakathi, okuyinto ihlose ngokuqondile ukulawula imisebenzi ukuphathwa, ukuhlela kanye nomklamo kohlelo lokuphatha, amasu ukuhlela lenkampani, ukuphathwa Consulting, basebenzisane emithonjeni yangaphandle futhi izici.
Kutfutfukiswa izinqumo zokuphatha ukuhlela amasu noma yimuphi umkhakha, libukeka uhlelo of intuthuko yezenhlalo nezomnotho. Lesi Sikhungo esivame ukubizwa zokudala ukuphathwa isinqumo futhi ngokuzithandela isinyathelo ukulawula inhlangano, okuyinto lusekelwe ekwazini kwemithetho ethile, nesebenzela uhlelo lokulawula, ukuhlaziya ulwazi kanye nokusebenza kwayo isebenza.
Ingqikithi ukuphathwa isinqumo zehla kubasebenzi ukuphathwa indlela, esakhiwa izindlela ukuthonya abantu umsebenzi kuhlelembisa imisebenzi yabo ibhizinisi. Ukuze wenze lokhu, umphathi kumelwe wazi kahle futhi bamele izimfuno nezidingo kwabasebenzi. Priority kudalwa ukhululekile (ikhaya) umsebenzi imvelo, kanye olunzulu abasebenzi ekuthuthukiseni njengoba Kumuntu Imibandela kwamasiko futhi professional kuyizinto eziza kuqala ezinqumweni ukuphathwa.
Ngakho, izinhlobo ukusebenza kwezinqumo ukuphathwa kungaba kubonakaliswe hhayi kuphela izinhlangano kwezomnotho noma izinhlangano yenhlangano okwenza, kodwa futhi baphoqelelwa ukuba zihilela ingxenye yezenhlalo abasebenzi.
Ngaphezu ketshezi kwezomnotho sezinqumo, ewukwenza kubo ukuqaliswa iMali kanye naBasebenzi, kukhona inhlangano yenhlangano. Yena iqhaza enqubeni izinqumo abasebenzi ngqo siqu. Ungase futhi ukugqamisa nature kwezomthetho nezobuchwepheshe izinqumo zokuphatha. Legal kuhambisana nemithetho zokuthathwa kwezinqumo kanye nemithetho neziqondiso ezisebenzayo, futhi amakhono kwezobuchwepheshe ukuhlinzekwa kwabasebenzi lobuchwepheshe izindlela nezisetshenziswa ekusetshenzisweni kwazo futhi Ukuqaphela.
Stroller-transformer for abancane